ढोरपाटनको बैशाख पूर्णिमा मेलालाई समेट्दै बैशाखमा बुर्तिवाङ महोत्सव गरिने ! – ebaglung.com
ढोरपाटनको बैशाख पूर्णिमा मेलालाई समेट्दै बैशाखमा बुर्तिवाङ महोत्सव गरिने !
२०७३ माघ ८, शनिबार १८:२८	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
सुमन सुनार, बुर्तिबाङ २०७३ माघ ८ । बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ इकाई बुर्तिबाङको बैठक आज सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी बैशाख महिनामा बुर्तिबाङ महोत्सवको आयोजना गर्न आवश्यक परामर्श सँगै तयारी तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय समितिसँग सहकार्य गर्दै जिल्ला स्थित बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न सहकार्य गर्न सकिने संघ संस्था संग समितिले आवश्यक परामर्श गर्ने भएको छ । माघ महिनाको दास्रो हप्तासम्म सबै पक्षसँग छलफल चलाएपनि, महोत्सव सञ्चालनको अन्तिम निर्णय गरिने बैठकमा सहमति गरिएको समितिका महासचिव रामनारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैठकले परामर्शका लागि संघका अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ । अहिलेसम्म महोत्सव नभएको स्थानमा महोत्सव सञ्चालन गर्न केही चुनौति भएपछि जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व समेत हामीमा रहेको संघका अध्यक्ष शर्माले ईबागलुङलाई बताए । विषेश गरि ढोरपाटनलाई समेत लक्षित गरि बैशाखे पूर्णिमालाई समेटने गरि महोत्सवको तिथि मिति घोषणा गर्न सकिने गरि छलफल अघि बढेको उनले बताए ।
यस्तै बैठकले, बुर्तिबाङ बजार क्षेत्र अव्यवस्थित बन्दै गएको भन्दै, एकीकृत सेवा केन्द्र, इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङ र उद्योग वाणिज्य संघ इकाईबीच यस अघि गरिएको सहमति अनुसार, त्यसको व्यवस्थापन गर्न भोली आईतबारबाटै अभियान सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ ।
पहिलो चरणमा माईकिङ तथा भेटघाट नै गरि वजारमा अस्त व्यस्त राखिएका सामाग्रीलाई व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने, बुधबारसम्म उचित व्यवस्थापन नगरे, विहिबारबाट पहिलो पटकका लागि १ हजार जरिवाना गर्ने र फेरि पनि दोहोरयाएमा सडक च्यापेर राखिएका सामान प्रहरी प्रशासनले जफत गर्ने भएको छ ।
बजार क्षेत्रमा अहिले विभिन्न व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुले सडक नै मिचेर सामानहरु राख्दा आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ । अव सबै व्यवसायीले आफ्नो पहिलो पेटि भन्दा तल सामान राख्न नपाउने भएकाछन् । यदी उक्त नियम मिचेर अटेर गरे कार्वाहीको प्रक्रियामा जाने आजको बैठकमा सहमति गरिएको छ । वजार व्यवसायीलाई संघ सहित प्रहरी र प्रशासनले तत्काल सूचना जारि गर्ने, संझाउने त्यसो गर्दा पनि अटेर गर्नेहरु कार्वाहीको फन्दामा फस्ने भएका छन् ।
बजार क्षेत्रमा फेन्सि कपडाहरु वाहिरसम्म टाँग्ने, तरकारी तथा फलफूल पसलहरुमा वाहिर सडकसम्म सामान राख्ने, भाँडा पसल तथा हार्डवेर पसलका सामानहरु सडक नै मिचेर राख्ने गरेको पाइएको छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको संघले जनाएको छ ।
यस्तै बैठकले गत मंसिर महिनाको २२, २३ र २४ गते बुर्तिबाङमा सञ्चालन गरेको नि:शुल्क आँखा शिविरको आम्दानी तथा खर्चको समेत अनुमोदन गरिएको छ । शिविरका लागि संघको आग्रहमा बुर्तिबाङ गाउँ विकास समितिबाट १ लाख तथा संघले चलाएको आर्थिक संकलन अभियानबाट ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ गरि कुल १ लाख ५३ हजार ७ सय रुपैया आँदानी भएको छ । शिविरको व्यवस्थापनमा १ लाख ४५ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भई ८ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ बचत रहेको संघको बैठकले हिसाव अनुमोदन गरेको छ ।